CDLF mitsangana Multistage Stainless Steel Centrifugal Pump - China Shanghai Søg paompy
WQGS Submersible maloto Pump
CDL mitsangana Multistage Stainless Steel Centrifugal ...
CDLF mitsangana Multistage Stainless Steel Centrifugal ...
CHLF marindrano Multistage Stainless Steel Centrifug ...
CHL marindrano Multistage Stainless Steel Centrifuga ...
CDLF mitsangana Multistage Stainless Steel Centrifugal Pump
CDL / CDLF dia karazana mitsangana multi-Functional products.It dia azo ampiasaina mba hampita fitaovana isan-karazany avy amin'ny paompy rano orinasa rano amin'ny hafa ny hafanana sy ny samy hafa sy ny fanerena fizotran'ny tahan'ny. CDL karazana no azo ampiharina ny fampitana tsy manimba tsikelikely rano, raha mbola CDLF dia mety ho kely rano manimba tsikelikely.
Alefaso mailaka ho antsika Catalogue Download
CDLF dia karazana mitsangana tsy tena priming multistage centrifugal paompy, izay entin'ny fitsipika herinaratra maotera. Ny maotera Output lavaka mifandray mivantana amin'ny paompy lavaka amin'ny alalan'ny anankiray efa voavitrana. Mahatohitra ny tsindry-varingarina ireo dia efa raikitra eo amin'ny paompy lohany sy Inlet & fivoahan'ny fizarana amin'ny hitoetra horonan. Ny Inlet sy ny fivoahan'ny dia hita amin'ny paompy ambany miaraka amin'izay koa fiaramanidina. Io karazana paompy azo fitaovana mpiaro amin'ny manan-tsaina mahomby hisakanana azy tsy ho maina-mihazakazaka, avy-of-dingana sy ny be loatra.
1) Thin, madio, tsy flammable sy ny tsy-mipoaka ranon-javatra tsy misy mafy granules sy ny kofehy.
2) Rano hafanana: Normal hafanana karazana: -15 ℃ ~ + 70 ℃; Hot rano karazana: -15 ℃ ~ + 120 ℃
3) Ambient mari-pana: hatramin'ny + 40 ℃
4) Altitude: hatramin'ny 1000m
5) Rehefa hakitroky na viscosity ny fifindran'ny mpanelanelana amin'ny tontolo mihoatra ny an'ny rano, dia ilaina ny mifidy fiara ny maotera avo-hery.
Fahafahana: 2 hatramin'ny 500 m³ / h
Head: 15 hatramin'ny 195 M
Fahombiazana: 72% hatramin'ny 92,5%
Fihodinan'ny Speed: 2900 R / min
Hery: 0,37 hatramin'ny 15 KW
Special fitakiana azo fifampiraharahana.
1) Water Supply: ny rano sivana sy ny fitaterana amin'ny lakandrano, boosting ny fantsona lehibe, boosting amin'ny trano avo be.
2) Industrial Boosting: dingana rano mikoriana rafitra, rafitra manadio, avo-tsindry fanasan rafitra, rafitra niady afo.
3) Industrial Rano Mampita: hihena sy ny rivotra-pana rafitra, etona rano sy condensing rafitra, milina-miaraka tanjona, sy ny alkali amine.
4) Water Fitsaboana: Ultra filtration rafitra.
6) Distillation System, Separator, dobo filomanosana.
7) Irrigation: toeram-pambolena fampidiran-drano, Mitifitra fitarihan-drano, fitarihan-drano mitete.
1. feno-fonosina rivotra tony nitendry tsato-kazo roa-maotera fitsipika
2. Fiarovana Class: IP55
4. Standard TOSIKARATRA: 50Hz: 1 x 220-230 / 240V
Taorian'ny toe-piainana dia mety ho ny fampisehoana aseho miolakolaka Bellow:
1. miolakolaka rehetra dia miorina amin'ny norefesiny soatoavin'ny 50Hz: foana maotera 2900rpm hafainganam-pandeha na 2950rpm.
2. Curve fandeferana mifanaraka amin'ny 1SO9006 fanampiny A.
3. fandrefesana atao amin'ny 20 ℃ rivotra-maimaim-poana ny rano. kinematic viscosity ny mm2 / sec.
4. Ny asan'ny paompy dia manondro ny fampisehoana faritra asehon'ny ny nivaingana curve mba tsy overheating loatra noho ny kely na be loatra ny tahan'ny mikoriana ny maotera lehibe loatra noho ny tahan'ny mikoriana.
Previous: CHLF marindrano Multistage Stainless Steel Centrifugal Pump
Next: CDL mitsangana Multistage Stainless Steel Centrifugal Pump
Best Price mitsangana Multistage paompy
Best Price mitsangana Multistage Water Pump
Big fahaiza mitsangana Pump
Cdl & Gdl & Cr mitsangana Multistage Pump
Tsara Quality mitsangana Multistage Pump
High fahaiza Booster mitsangana paompy
High Quality mitsangana Multistage Water paompy
Vita avy any Shina mitsangana Multistage Pump
Professional mitsangana Water Pump
Professional rano nivezivezy paompy
Professional rano nafindrany Pump
Same Pump Amin'ny Cnp
Same Pump Amin'ny Danemark Grundfos
Same Pump Amin'ny Grundfos
Faharoa Feed Pump
Faharoa Pressure Pump
Faharoa Water Supply Pump
Special TOSIKARATRA mitsangana Water Pump
Special rano Feed paompy
mitsangana Multistage Centrifugal Pump
mitsangana Multistage Centrifugal paompy
mitsangana Multistage nivezivezy paompy
mitsangana Multistage Circulation Pump
mitsangana Multistage Pump
Mitsangana Multistage Pump fanamboarana
Mitsangana Multistage Pump Plant
Mitsangana Multistage Pump Supplier
mitsangana Multistage paompy
mitsangana Multistage Water Pump
Mitsangana Multistage Water Pump China Supplier
Mitsangana Multistage Water Transfer Pump
Mitsangana Stainless Steel Water Pump fanamboarana
Mitsangana Turbine Water Pump
Mitsangana Water Feed Pump
mitsangana Water Pump
Mitsangana Water Transfer Pump
Water Pump Same Design Amin'ny Grundfos